မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဒေါ်လာဈေး အနည်းငယ်ကျ၊ ရွှေဈေးငြိမ်
ဒေါ်လာဈေး အနည်းငယ်ကျ၊ ရွှေဈေးငြိမ်
ဗဟိုဘဏ်က အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို သွင်းကုန်လုပ်ငန်းအမျိုးအစား သုံးခုအတွက် ထုတ်ရောင်းထားတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိက ဘဏ်တွေမှာ ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်း အနည်းငယ်ကျ သွားတယ်ဆိုပေမဲ့ ပြင်ပဈေးကွက်မှာတော့ ကျပ် ၂၀၀၀ အထက်မှာပဲ ရှိနေတုန်းပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မြန်မာ့ရွှေဈေးနှုန်းဟာ ၁၈ သိန်းအောက်ကို မရောက်နိုင်သေးဘဲ ဒီဝန်းကျင်မှာ ရှိနေဦးမယ်လို့ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်တွေက ပြောလိုက်ပါတယ်။ ရန်ကုန်က ပေးပို့တဲ့ ဒီသတင်းကိုတော့ ကိုခင်မောင်စိုးမင်း. က ပြောပြပေးမှာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံ ဗဟိုဘဏ်က ၁ ဒေါ်လာကို ကျပ် ၁၈၂၀ နှုန်းနဲ့ အမေရိကန်ဒေါ်လာ သန်း ၅၀ ကို အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်က ထုတ်ရောင်းခဲ့ပါတယ် ဒါဟာ ဗဟိုဘဏ်ထုတ်ရောင်းပေးတဲ့ထဲမှာ ပမာဏ အများဆုံး ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဒီဒေါ်လာသန်း ၅၀ ကို စားသုံးဆီ၊ လောင်စာဆီနဲ့ ဆေးဝါးတင်းသွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေအတွက်ပဲ ထုတ်ရောင်းပေးတာဖြစ်လို့ ပြင်ပဒေါ်လာဈေးကွက် အပေါ်ကိုတော့ သက်ရောက်မှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
လောင်စာဆီတင်သွင်းတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တယောက်ကတော့ သူတို့အသင်းအနေနဲ့ ဒေါ်လာ ၃ သန်းပဲ ဝယ်လို့ရခဲ့တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာ တခြားသွင်းကုန်လုပ်ငန်းတွေလုပ်နေကြတဲ့ လုပ်ငန်းရှင်တွေလည်း အမေရိကန် ဒေါ်လာကို လိုသလောက်ဝယ်ဖို့ အခက်အခဲ ဖြစ်နေဆဲမို့ ပြင်ပငွေလဲဈေးကွက်မှာတော့ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာကို ကျပ် ၂၀၀၀ အထက်မှာ ရှိနေတုန်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ပြင်ပပေါက်ဈေးနဲ့ တွက်ချက်ထားတဲ့ မြန်မာ့ရွှေဈေးနှုန်းကလည်း ၁၈ သိန်းအထက်မှာပဲ ရှိနေတုန်းပါ။ ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမျိုးမြင့်က ဒီနေ့ ရွှေဈေးကွက်အခြေအနေကို အခုလိုပြောပါတယ်။ပြီးတော့ ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးနှုန်းကလည်း ဒီရက်ပိုင်းမှာ ပြန်တက်လာတယ်လို့ သူကပြောတာပါ။
“ကမ္ဘာ့ဈေးကျရင်တော့ ကျလို့ရပါတယ်။ ဒေါ်လာက ထုတ်ရောင်းတယ်ဆိုတာက ကျနော်တို့ရောင်း၊ ဈေးကွက်ကို ရောင်းပေးတာ မဟုတ်ဘူး၊ သူကကုမ္ပဏီတွေကို ဘဏ်တွေကို ရောင်းပေးတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အပြင်မှာက ဒေါ်လာကဝယ်လို့ မရဘူး၊ ၂၀၀၀ ကျော်အနည်းဆုံး ဝယ်နေရတော့။ အမှန်မှာတော့ အရင်လိုပဲ တယောက်ကို ၁၀၀၀ ရောင်းနိုင် ရောင်းနိုင်၊ ၅၀၀ ပဲရောင်းနိုင် ရောင်းနိုင်money changer တွေကနေပြီးတော့ ရောင်းပေးလိုက်ရင်တော့ ကျနော်တို့ အစိုးရရောင်းပေးတဲ့ ဈေးနည်းရတယ်ဆိုရင် ဒီဘက်ရွှေဈေးတွက်တဲ့အခါကျ ကုန်သည်က အဲလိုတွက်ကြတာပေါ့။ ကျနော်တို့လည်း ကျတဲ့အပိုင်းကိုပဲ သွားချင်ပါတယ်။ ရွှေကျမှ ကျန်တဲ့ပစ္စည်းတွေလည်း ကျမှာ။”
၂၀၂၁ ဇန်နဝါရီလတုန်းက အမေရိကန် ဒေါ်လာငွေလဲနှုန်းဟာ ၁ ဒေါ်လာကို ပြင်ပပေါက်ဈေး ကျပ် ၁၃၃၀ ပဲရှိပါတယ်။ အခုလက်ရှိဆိုရင်တော့ အောက်တိုဘာ ၁၈ ရက်နေ့က ဗဟိုဘဏ်သတ်မှတ်တဲ့ ငွေလဲနှုန်းဟာ အမေရိကန် ၁ ဒေါ်လာကို မြန်မာကျပ်ငွေ ၁၈၂၀ ကျပ်ဖြစ်ပြီး ရန်ကုန်မြို့ ကပြင်ပ တရားဝင် ငွေလဲ ကောင်တာတွေမှာတော့ ဝယ်ဈေး ၂၀၀၀ ကျပ်၊ ရောင်းဈေး ၂၀၄၀ ကျပ် အထိ ရှိခဲ့ပါတယ်။ ရွှေဈေးကတော့ အခေါက်ရွှေ တကျပ်သားကို ရန်ကုန် မှာ ၁၈၃၅၀၀၀ ကျပ်ဈေးဖြစ်နေပါတယ်။
ဗဟိုဘဏျက အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၅၀ ကို သှငျးကုနျလုပျငနျးအမြိုးအစား သုံးခုအတှကျ ထုတျရောငျးထားတဲ့အတှကျ ပုဂ်ဂလိက ဘဏျတှမှော ဒျေါလာငှလေဲနှုနျး အနညျးငယျကြ သှားတယျဆိုပမေဲ့ ပွငျပဈေးကှကျမှာတော့ ကပျြ ၂၀၀၀ အထကျမှာပဲ ရှိနတေုနျးပဲ ဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ မွနျမာ့ရှဈေေးနှုနျးဟာ ၁၈ သိနျးအောကျကို မရောကျနိုငျသေးဘဲ ဒီဝနျးကငျြမှာ ရှိနဦေးမယျလို့ ရှလေုပျငနျးရှငျတှကေ ပွောလိုကျပါတယျ။ ရနျကုနျက ပေးပို့တဲ့ ဒီသတငျးကိုတော့ ကိုခငျမောငျစိုးမငျး. က ပွောပွပေးမှာပါ။
မွနျမာနိုငျငံ ဗဟိုဘဏျက ၁ ဒျေါလာကို ကပျြ ၁၈၂၀ နှုနျးနဲ့ အမရေိကနျဒျေါလာ သနျး ၅၀ ကို အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျက ထုတျရောငျးခဲ့ပါတယျ ဒါဟာ ဗဟိုဘဏျထုတျရောငျးပေးတဲ့ထဲမှာ ပမာဏ အမြားဆုံး ဖွဈပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ ဒီဒျေါလာသနျး ၅၀ ကို စားသုံးဆီ၊ လောငျစာဆီနဲ့ ဆေးဝါးတငျးသှငျးတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှအေတှကျပဲ ထုတျရောငျးပေးတာဖွဈလို့ ပွငျပဒျေါလာဈေးကှကျ အပျေါကိုတော့ သကျရောကျမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။
လောငျစာဆီတငျသှငျးတဲ့ လုပျငနျးရှငျတယောကျကတော့ သူတို့အသငျးအနနေဲ့ ဒျေါလာ ၃ သနျးပဲ ဝယျလို့ရခဲ့တယျလို့ ပွောပါတယျ။
မွနျမာနိုငျငံမှာ တခွားသှငျးကုနျလုပျငနျးတှလေုပျနကွေတဲ့ လုပျငနျးရှငျတှလေညျး အမရေိကနျ ဒျေါလာကို လိုသလောကျဝယျဖို့ အခကျအခဲ ဖွဈနဆေဲမို့ ပွငျပငှလေဲဈေးကှကျမှာတော့ အမရေိကနျ ၁ ဒျေါလာကို ကပျြ ၂၀၀၀ အထကျမှာ ရှိနတေုနျးဖွဈပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ ပွငျပပေါကျဈေးနဲ့ တှကျခကျြထားတဲ့ မွနျမာ့ရှဈေေးနှုနျးကလညျး ၁၈ သိနျးအထကျမှာပဲ ရှိနတေုနျးပါ။ ရှလေုပျငနျးရှငျမြားအသငျး ဥက်ကဋ်ဌ ဦးမြိုးမွငျ့က ဒီနေ့ ရှဈေေးကှကျအခွအေနကေို အခုလိုပွောပါတယျ။ပွီးတော့ ကမ်ဘာ့ရှဈေေးနှုနျးကလညျး ဒီရကျပိုငျးမှာ ပွနျတကျလာတယျလို့ သူကပွောတာပါ။
“ကမ်ဘာ့ဈေးကရြငျတော့ ကလြို့ရပါတယျ။ ဒျေါလာက ထုတျရောငျးတယျဆိုတာက ကနြျောတို့ရောငျး၊ ဈေးကှကျကို ရောငျးပေးတာ မဟုတျဘူး၊ သူကကုမ်ပဏီတှကေို ဘဏျတှကေို ရောငျးပေးတာပေါ့။ အဲဒီတော့ အပွငျမှာက ဒျေါလာကဝယျလို့ မရဘူး၊ ၂၀၀၀ ကြျောအနညျးဆုံး ဝယျနရေတော့။ အမှနျမှာတော့ အရငျလိုပဲ တယောကျကို ၁၀၀၀ ရောငျးနိုငျ ရောငျးနိုငျ၊ ၅၀၀ ပဲရောငျးနိုငျ ရောငျးနိုငျmoney changer တှကေနပွေီးတော့ ရောငျးပေးလိုကျရငျတော့ ကနြျောတို့ အစိုးရရောငျးပေးတဲ့ ဈေးနညျးရတယျဆိုရငျ ဒီဘကျရှဈေေးတှကျတဲ့အခါကြ ကုနျသညျက အဲလိုတှကျကွတာပေါ့။ ကနြျောတို့လညျး ကတြဲ့အပိုငျးကိုပဲ သှားခငျြပါတယျ။ ရှကေမြှ ကနျြတဲ့ပစ်စညျးတှလေညျး ကမြှာ။”
၂၀၂၁ ဇနျနဝါရီလတုနျးက အမရေိကနျ ဒျေါလာငှလေဲနှုနျးဟာ ၁ ဒျေါလာကို ပွငျပပေါကျဈေး ကပျြ ၁၃၃၀ ပဲရှိပါတယျ။ အခုလကျရှိဆိုရငျတော့ အောကျတိုဘာ ၁၈ ရကျနကေ့ ဗဟိုဘဏျသတျမှတျတဲ့ ငှလေဲနှုနျးဟာ အမရေိကနျ ၁ ဒျေါလာကို မွနျမာကပျြငှေ ၁၈၂၀ ကပျြဖွဈပွီး ရနျကုနျမွို့ ကပွငျပ တရားဝငျ ငှလေဲ ကောငျတာတှမှောတော့ ဝယျဈေး ၂၀၀၀ ကပျြ၊ ရောငျးဈေး ၂၀၄၀ ကပျြ အထိ ရှိခဲ့ပါတယျ။ ရှဈေေးကတော့ အခေါကျရှေ တကပျြသားကို ရနျကုနျ မှာ ၁၈၃၅၀၀၀ ကပျြဈေးဖွဈနပေါတယျ။
နိုင်ငံခြားငွေကြေးဈေးကွက် ဝယ်ရောင်းသတ်မှတ်မှု ဗဟိုဘဏ်ပယ်ဖျက်